I-Environmental Protection Agency (i-EPA) igunyaze i-Lysol Disinfectant Spray ukulwa ne-SARS-CoV-2, igciwane elibanga isifo se-coronavirus 2019 (COVID-19).
I-Environmental Protection Agency (i-EPA) ivume iLysol Disinfectant Spray ukulwa ne-SARS-CoV-2, igciwane elibanga isifo se-coronavirus 2019 (COVID-19), ngokuya ngokutholwe ucwaningo olushicilelwe kwi-American Journal of Infection Control (AJIC) ), Le nhlangano yamemezela emaphephandabeni.
Njengoba amacala e-COVID-19 akhuphukile ekuqaleni konyaka, ama-sanitizer amaningi kanye nezibulala-magciwane benza isimangalo somsebenzi wokulwa naleli gciwane, kepha yimikhiqizo evunyelwe yi-EPA kuphela engamaketha ngokusemthethweni ngaleyo ndlela. Ngokuvunyelwa kwaleli sonto, kutholakale ukuthi iLysol Disinfectant Spray (EPA Reg No. 777-99) kanye neLysol Disinfectant Max Cover Mist (EPA Reg No. 777-127) ingasebenzi i-pathogen ngemizuzu emi-2 yokusetshenziswa ezindaweni ezinzima, ezingezona izigaxa , ngemihlahlandlela yokuhlola ye-EPA.
Ucwaningo olubukeziwe lontanga luhlolisise ukusebenza kwemikhiqizo eminingi kuqhathaniswa ne-SARS-CoV-2 futhi lwabika ukusebenza kwe-Lysol ikakhulukazi ngama-99.9%.
I-Surin disinfection ibilokhu kugxilwe kakhulu kubaphenyi ngesikhathi salo bhubhane, njengoba bekungacaci ekuqaleni ukuthi iSARS-CoV-2 ingahlala isikhathi esingakanani ezindaweni ezahlukene. Njengamanje, i-US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) iyachaza ukuthi “kungenzeka ukuthi umuntu angathola i-COVID-19 ngokuthinta ingaphezulu noma into enaleli gciwane bese ethinta umlomo, ikhala, noma mhlawumbe amehlo abo. Lokhu akucatshangwa ukuthi kuyindlela eyinhloko igciwane elisakazeka ngayo, kodwa sisafunda kabanzi ngokuthi leli gciwane lisakazeka kanjani. ”
I-CDC incoma ukubulala amagciwane ngokuphelele kusetshenziswa izibulala-magciwane ezibhaliswe nge-EPA kuLuhlu N.
“Ukudluliswa kwamagciwane okuphefumula ngamagciwane afana ne-COVID-19 kungancishiswa ngokusetshenziswa ngokuphelele nangokuphelele kwesibulala-magciwane esibhaliswe nge-EPA ngokwemiyalo yomkhiqizi, efakiwe kuLuhlu N lwe-EPA, ezindaweni kanye nenhlanzeko yomuntu siqu, kubandakanya isandla inhlanzeko, nciphisa ukuxhumana nobuso bakho, nenhlonipho yokuphefumula / indlela yokukhwehlela, ”uWilliam A. Rutala, PhD, MPH, CIC, noDavid J. Weber, MD, MPH, babhale ku-athikili ye-Infection Control Today®.